Ny alikako dia mikiaka loatra, maninona? | Alika Manerantany
Encarni Arcoya | | Alika ankapobeny
Ny fitomboan'ny fivalanana ao amin'ny alika dia fantatry ny voambolana polyuria, ary mety miteraka antony maromaro izany. Matetika dia mariky ny aretina toy ny diabeta na aretina, ary raha tsy voatsabo ara-potoana izy io dia mety hiteraka tsy fahazoana aina lehibe amin'ilay biby. Izany no maha-zava-dehibe ny ahitantsika ny antony ary hiasa haingana isika.
Misy antony maromaro mety hisotroan'ny alika sy hanihany bebe kokoa. Ohatra iray amin'izany ny taona, satria ny alika antitra dia mazàna mandany ranon-javatra bebe kokoa; Na izany aza, raha manao izany be loatra izy ireo, dia mety hijaly amin'ny olana ara-pahasalamany. Etsy an-danin'izany, ny sakafo dia misy fiatraikany lehibe amin'io lafiny io, satria raha misy sira be loatra ao amin'ny sakafo, dia mila misotro ny biby ary noho izany dia mikiaka matetika kokoa.
1 Mahatonga ny alika mimi be loatra
2 Inona no mitranga raha alika be ny alika?
3 Ahoana ny fomba hampijanonako ny alikako tsy hikorontana ao an-trano?
4 Inona no hatao rehefa alika irery ny alika?
5 Impiry isan'andro ny alika no tokony handeha ho any amin'ny trano fidiovana?
6 Ny alikako dia miondrika be sy mangarahara
7 Ny alikako dia miondrika be ao an-trano
7.1 Olana ara-pahasalamana
7.2 Fidirana voafetra mankany amin'ny faritra fanariana
7.3 Ny tsy fetezana noho ny fitsaharan'ny taona na aretina
8 Ny alikako dia mikiaka be sy misotro rano be
9 Rako ny aliko
10 Ahoana no hahalalako raha manana olana amin'ny urinako ny alika
10.1 Fiovan'ny lokon'ny urine
10.2 Miova fofona
10.3 Fiovan'ny refin'ny urinary
11 Fihaonana amin'ny mpitsabo biby: ny fitsapana natao mba hahalalanao hoe maninona ny alikao no mihanaka be
12 Ny fitsaboana mahazatra rehefa mitsika matetika ny alikanao
13 Ny alika dia miteraka olana ara-urin kokoa
Mahatonga ny alika mimi be loatra
Amin'ny lafiny iray, ny fihinanana sakafo dia misy fiatraikany lehibe amin'io lafiny io, satria raha misy sira be loatra ny sakafon'izy ireo, dia mila misotro ilay biby ary noho izany, mihanika matetika kokoa.
Na izany aza, mahita antony matotra kokoa isika izay mety hitarika amin'ny fisotrony be loatra. Anisan'izy ireo no ahitantsika ny diabeta mellitus, izany dia mihevitra ny fitomboan'ny siramamy manimba ao anaty ra. Ho haintsika izany raha ny alikantsika dia mijaly amin'ity aretina ity mitsidika ny vet, iza no hanatanteraka ny famakafakana sahaza azy. Raha izany dia mila fitsaboana eo noho eo izy ary hiditra amin'ny rano tsy tapaka. Ireo fambara ireo dia mety hiseho ihany koa noho ilay antsoina hoe diabeta insipidus, izay manondro fiasa tsy ara-dalàna amin'ny hypothalamus sy / na ny fihary pituitary.
Amin'ny ankapobeny, mety miatrika aretina miteraka fahasimban'ny voa isika, toy ny leishmaniasis, hyperthyroidism na Cushing's syndrome, izay misy fiatraikany amin'ny taova maro, ao anatin'izany ny voa.
Raha ny fitsipika dia tsy resaka fanairana io, satria ara-dalàna ny alika maro ny mihanaka imbetsaka isan'androNa izany aza, malina hatrany ny manaparitaka fa tsy aretina izy io ary noho izany dia ilaina ny mahafantatra ireo antony mety hiteraka an'io toe-javatra io amin'ny biby fiompinao.
Ohatra iray amin'izany ny fanahiana, noho ny fisarahana. Izany dia mahatonga ny sakaizantsika volo hiseho andian-toetra tsy hay hazavaina ary eo amin'izy ireo dia ny urination amin'ny fotoana rehetra ary misy fanamafisana bebe kokoa eo akaikin'ny varavarana.
Ny faritany fanamarihana, izay fitondran-tena izay matetika misy ny lehilahy ary betsaka kokoa rehefa tsy voaroaka na tsy afa-mihetsika izy ireo, fa izany koa dia misy amin'ny vehivavy. Samy mikoty amin'ny faritra samihafa ao an-trano izy ireo, satria tian'izy ireo izany.
Fahita ihany koa amin'ny alika izay mbola eo am-pianarana., fa tsy dia nampiofanina tsara izy ireo na hoe nandeha nivily kely fotsiny. Ny hevitra dia omena azy ireo tsara tsy rehefa manabe azy ireo, fa omena azy ireo koa ny habetsaky ny toeram-pivarotana ilaina hanamaivanana ny tenany.
Ny tsy fitandremana dia antony iray hafa mety hiteraka an'io fihetsika io, satria fantatry ny alika fa ny fisintahana ao anaty trano sy amin'ny toerana maro dia tsy isalasalana fa hisarika ny fahaliananao.
Inona no mitranga raha alika be ny alika?
Ny zava-misy fa ny alikanao dia mimi foana sy amin'ny toerana rehetra, Tokony ho antony hijerena akaiky foana izany ary hankanesana any amin'ny consultation miaraka amin'ny veterineraSatria ny fanombanana ataon'ny manam-pahaizana manokana dia hampiharihary na tsia ny fanadihadiana manokana, ary koa ny fitsaboana mifanaraka amin'izany.
Aza adino fa toy ny olana amin'ny fitondran-tena, mety ho aretina sasany koa izay mahatonga ny alika hamindra amin'ny fotoana rehetra ary noho izany dia mila fikarakarana ny fahasalamany.
Ahoana ny fomba hampijanonako ny alikako tsy hikorontana ao an-trano?
Rehefa manana alika ao an-trano isika, mila manana faharetana be ianao hampianarana azy ireo ary ataovy mahafinaritra ny rehetra ny fiaraha-miaina. Ny amboa dia manana faharanitan-tsaina ampy hanarahana ny lalàna, ary isika no tokony hikarakara hampahafantatra azy ireo hoe iza izy ireo.
Mazava ho azy, mampihatra fanamafisana tsara foana mba hahazoana antoka fa tsy pee ao anaty trano izy, fa aiza no hanapahanao hevitra, fa ahoana no hanatanterahana azy?
Ny voalohany dia ny fiofanana tsy misy sazy, miabo foana. Manomeza baiko amin'ny fampiasana baiko izay mora azoRehefa mikiaka any amin'ny toerana tsy tokony ho ampy izy amin'ny TSY mavitrika sy hentitra, tsy misy ifandraisany amin'ny kiakiaka na kabary satria amin'ny voalohany dia hatahoranao sy hialanao azy ary amin'ny faharoa dia hampifangaro azy fotsiny ianao.
Raha miziriziry manao ilay alika ny alika, indrindra rehefa alika alika izy dia aza hadino, satria io no fomba fampahafantarana azy fa sosotra ianao ary tsy mety ny nataony. Hatanjaho rehefa mahazo azy tsara amin'ny fitsaboana, izay mety ho avy amin'ny biby fiompy ka hatramin'ny fitsaboana doggie.
Na dia maharitra aza io fizarana fanabeazana io dia azonao atao mampiasa soakers ka raha mikiaka any an-trano izy ireo dia fantatr'izy ireo fa tokony hataon'izy ireo any amin'io faritra io.
Inona no hatao rehefa alika irery ny alika?
Rehefa alika kely fotsiny izy ireo, dia mahazatra ny mivoaka ny urine raha mianatra mifehy izy ireo amin'izany lafiny izany dia mizara telo ireo olan'ny fandosirana an-tsitrapo ireo:
Tsy fahampian'ny fahazarana manafoana.
Ny fialana vokatry ny fientanam-po tafahoatra na ny vokatry ny tahotra na ny fanekena.
Malformations ao amin'ny urinary rafitra izay mahatonga azy tsy afaka mifehy ny urination.
Hanitsiana ny teboka voalohany, Ny alika kely dia tsy maintsy omena toerana ao an-trano ahafahan'izy ireo miditra malalaka hanamaivanana ny tenanyZava-dehibe ihany koa fa manomboka amin'ny herinandro fahasivy dia manomboka mitondra azy eny an-dalambe im-betsaka isan'andro ianao ary miaraka amin'izay koa, mba ho zatra manao azy eny an-dalana.
Momba ny teboka faharoa izay mifamatotra amin'ny fihetsem-po, Mety amin'ny tranga misy fientanentanana tafahoatra, ny hampihenanao ny hamafin'ny lalao sy ny fikolokoloana rehefa mody any an-tranoAleo ianao miarahaba azy am-pitoniana sy mikosoka azy rehefa milamina.
Raha noho ny fandefasana noho ny kiakiaka na ny sazy teo aloha dia tsara kokoa ny manafoana ireo sazy ireo amin'ny fotony fa tsy manery azy ireo raha matahotra izy ireo ary mahazo fahatokisan-tena amin'ny fanomezana valisoa azy ireo rehefa avelany hanakaiky kokoa isika.
Amin'ny olon-dehibe, ary rehefa efa nanda izahay fa ny olana dia avy amin'ny toe-javatra azo fehezina toy ny fitaintainanana, ny fanamarihana ny faritany na ny fizotry ny fianarana, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny mitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo biby mba hialana amin'ny patolojia.
Impiry isan'andro ny alika no tokony handeha ho any amin'ny trano fidiovana?
Mahaliana ity teboka ity, satria ny fitsangantsanganana dia mifamatotra akaiky amin'ny taonan'ny alika ary koa amin'ny toetry ny fahasalamany. Tsy mitovy ny maka alika kely hanala ny tenany fa tsy amin'ny olon-dehibe na alika antitra, ohatra, ilay teo aloha dia mila mivoaka bebe kokoa rehefa mianatra.
Raha ny marina dia manondro izany ny manam-pahaizana hatramin'ny 8 herinandro dia tsy maintsy avoakantsika in-12 isan'andro Ary raha manontany tena ianao hoe maninona no be dia be, ny fanazavana dia hoe mbola mianatra manao ny fandevonan-kanina izy ireo ary mitaky fivoahana matetika kokoa mba hialana amin'ny otrika.
Mihena io matetika rehefa mihalehibe izy ireo, izany no mila mivoaka farafahakeliny 15 isan'andro isan'andro ireo eo anelanelan'ny 22 sy 8 herinandro. Aorian'ny 22 hariva ary hatramin'ny 32 hariva dia ahena ho 6 ny fiaingana ary rehefa olon-dehibe izy ireo dia tonga 3 hatramin'ny 4 isan'andro.
Ny alikako dia miondrika be sy mangarahara
Ny lokon'ny rihin'ny alikao dia afaka manambara zavatra betsaka manjo azy, Rehefa mazava izany ary mihetsika matetika ny tsinainao dia azo antoka fa misotro rano be dia be ianao.
Amin'ity tranga ity dia zava-dehibe ny fiheverana fa misotro rano betsaka kokoa noho ny mahazatra ianao, satria ny sakafo dia mety manana siramamy masira betsaka, indrindra raha zatra manome azy ireo sakafo hohanin'ny olombelona.
Azo atao ihany koa fa ny sakafo, na maina na lena, sakafo voajanahary ary na ny tsakitsaky aza, dia misy sodium be dia be ary noho izany dia tokony ovaina miaraka amin'ny fanohanan'ny mpitsabo biby, satria raha tsy izany dia hitohy hihazakazaka be izy ary ny kristaly kely dia mety mipoitra koa aza amin'ny urine.
Ny alikako dia miondrika be ao an-trano
Fonosana ara-toekarena Arquivet ...
Mety ho antony maro hafa no hampahafantarinay anao eto ambany.
Ny voalohany dia esory miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana raha toa ka tsy misy ifandraisany amin'ny aretina ireo urination mitohy ireo ny lalan-dra, ny neurolojia, ny olana endocrine, ny polydipsia, sns.
Fidirana voafetra mankany amin'ny faritra fanariana
Mety tsy manana fidirana ampy na ampy an'izay ilainao ianao, ho an'ilay faritra notendrenao hanamaivanana ny tenany, na eny an-dalambe, na an-tokotany na an-jaridaina.
Ny tsy fetezana noho ny fitsaharan'ny taona na aretina
Amin'ireo tranga rehetra ireo dia ny fitsaboana azy ireo amin'ny zava-mahadomelina lazain'ny mpitsabo biby no filamatra. Ireo antony efa voalaza sy nohazavaina teo aloha dia isaina ihany koa, toy ny fanahiana misaraka, fanamarihana, fanekena, fientanam-po, tahotra ary fisarika ny saina.
Ny alikako dia mikiaka be sy misotro rano be
Polyuria dia manana ny fisiany amin'ny antony samihafa izay mety misy ifandraisany amin'ny aretina sasany ao amin'ilay alika. Ny pathologies toy ny diabeta na ny aretin'ny urinary dia tsy isalasalana fa miteraka fivalanana be loatra ary indraindray tsy misy fanaraha-maso ary noho izany dia tsy maintsy tsaboina ara-potoana izy ireo mba tsy hanimba ny fahasalaman'ny alika.
Ohatra, ny alika antitra iray dia mila mihinana tsiranoka betsaka kokoa ary izany no mahatonga azy hihiaka bebe kokoa, izay ao anatin'ny fetra ara-dalàna; raha hitanao fa misotro rano be loatra ianao dia tsy maintsy manilika olana ara-pahasalamana. Na izany na tsy izany, ny zavatra tena mahomby dia ny fitondrana azy io amin'ny consultation miaraka amin'ny mpitsabo biby anao.
Rako ny aliko
Ny iray amin'ireo toe-javatra mety hahitanao ny tenanao dia ny fisian'ny alikao be urina nefa koa amin'ny ra. Amin'ity tranga ity dia mety mivoaka mena ny mena, na ra vaovao sy velona tokoa. Raha mitranga izany, zava-dehibe ny mankanesana any amin'ny veterinera satria mety hanondro rà mandriaka ao anatiny izany (miteraka olana lehibe eo amin'ny vatana), sakana amin'ny tatavia, ratra amin'ny faritra, fivontosana ...
Amin'io lafiny io dia afaka mahita fomba telo ianao amin'ny famoahana rà: amin'ny endrika latsaka, dia mivoaka ny rà rehefa mivoaka; amin'ny endrika ra misy clots (maizina kokoa noho ny mahazatra); na ra madio, ny rà ihany no mimi.
Ahoana no hahalalako raha manana olana amin'ny urinako ny alika
Ny iray amin'ireo tsy fahombiazan'ny tompona maro dia ny fandehanany any amin'ny dokotera rehefa efa tara, izany hoe, rehefa manana olana matotra kokoa ny alika, raha efa hita mialoha izy ireo, dia azo natao kokoa ny vahaolana. Saingy midika ho fandinihana izany satria alika dia afaka mampitandrina fa manana aretina urinary. Ankehitriny, ho an'izay, tsy maintsy fantatrao ireo soritr'aretina vokariny, ary ireto manaraka ireto:
Fiovan'ny lokon'ny urine
Ny urine, toy ny amin'ny olombelona, ​​dia mety manana loko isan-karazany. Fa ny urine kosa dia "mazàna" mavo mavo mavo mavo, tsy matanjaka na tsy mazava. Ahoana raha tsy toy izao ny ranon'alikao? Mety hanondro olana izany.
Ohatra, raha mena ny mena, na mivolontsôkôlà, dia mety hidika izany fa marary ra ianao (ary tokony ho fantatrao ny antony); na raha maitso na volontsôkôlà ny fisotrony dia mety vokatry ny bilirubin izay avo loatra ao amin'ny vatana izany.
Raha mandinika izany ianao dia hanampy amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny biby fiompinao.
Fambara iray hafa koa izay mampitandrina anao fa misy olana eo amin'ny urinary dia, tsy isalasalana, ny fahitana ny fofon'ny urine. Raha izany dia, mety ho mafimafy kokoa io, fa mety hanova ny fofona ihany koa, izany hoe manana fofona metaly, na zavatra lo, noho izany dia alohan'ny olana urinary na ny rafitra fiterahana, ary tsy maintsy jerenao izany.
Fiovan'ny refin'ny urinary
Amin'ity tranga ity dia ny fisainanao mitsika be, fa mitandrema. Lehilahy maro no manana an'io fihetsika io satria ny ataon'izy ireo dia manamarika ny faritaniny. Araka izany dia mitazona ny mony izy ireo ary mamoaka azy matetika mba hahafantaran'ny biby hafa fa "azy ireo" ity toerana ity.
Safidy iray mety ho hitanao koa ny mikiaka matetika nefa kely dia kely, izay mety hanondro fa manana olana ianao amin'ny famoahana ny tatavia, na koa mankarary anao.
Tsy mahazo aina ve ny alikao rehefa mimi? Sarotra aminao ve ny manao an'io? Misy toe-javatra (izay matotra ihany koa) izay alikao mety ho sakanana ianao ary tsy ho afaka mimi tsara. Noho io antony io dia miteraka fanaintainana sy tsy fahazoana aina eo aminao, ary mahatonga anao tsy hatahotra.
Raha jerena izany dia ilaina ny mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby. Raha ny mahazatra dia vokatry ny aretin-kibo izany, izay, raha tratra ara-potoana dia tsy handroso (andro vitsivitsy fitsaboana ary hitovy ihany), fa mety ho vokatry ny vato voa ihany koa. Izany no antony tsy maintsy anaovanao fitsapana satria, raha sendra aretina, dia mety hahatratra ny voa izany ary hipaka any amin'ny ra mihitsy aza.
Fihaonana amin'ny mpitsabo biby: ny fitsapana natao mba hahalalanao hoe maninona ny alikao no mihanaka be
Raha tsy milamina ianao amin'ny farany ary nanapa-kevitra ny hanao fotoana amin'ny mpitsabo biby, dia tokony ho fantatrao fa afaka manao andiam-pitsapana maromaro izy hamaritana izay tsy mety amin'ny alikao.
Ireo fitsapana ireo dia mandalo a fitsapana ra (hijerena raha misy olana anatiny, aretina, sns.), ny sasany fehin-kibony sy ny antsanga urinary (Izy ireo no fantatra fa mety hitranga aminao sy mamaritra ny karazana fitsaboana manaraka).
Raha sendra aretina dia hita, ny zavatra azo antoka indrindra dia ny maka kolontsaina santionany iray hanombanana ny karazana aretina (mba hahafahana mametraka fitsaboana iray hafa). Matetika izy io dia haingana, fa indraindray maharitra 24 ora, noho izany dia manolotra antibiotika miharo vina ny mpitsabo ary mety miova arakaraka ny valiny.)
Ny porofo hafa iankinan'ny manam-pahaizana dia fitarafana sy taratra x izay milaza aminao raha misy fivontosana, fivontosana, na koa mandeha ra ao anatiny hazavao ny toetran'ny alika. Ny UPC ihany koa, fitsapana hijerena raha miasa tsara ny voa na misy fatiantoka proteinina dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra.
Ny fitsaboana mahazatra rehefa mitsika matetika ny alikanao
Raha vantany vao nanao ny fitsapana mifandraika amin'izany ny mpitsabo dia afaka manome diagnostika ny zava-mitranga amin'ny alikao izy. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, rehefa mikorisa be ny alika, ny tena antony dia voan'ny tsimok'aretina izy. Tsy midika izany fa tsy mety hisy karazana olana hafa, fa misy izany.
Na izany aza, ny mahazatra indrindra dia ny aretina sy ity tsaboina amin'ny alàlan'ny antibiotika raisina am-bava izany (indraindray voadona mba hahomby aloha) mba hamerenana amin'ny laoniny ny toetoetran'ny alika.
Rehefa mirona amin'ny areti-mifindra matetika ny alika dia asaina koa ny fitsaboana fisorohana, izany hoe mitandrina fanafody, ary koa miova amin'ny fomba fiainanao, mba tsy hitrangan'izany toe-javatra izany.
Ny alika dia miteraka olana ara-urin kokoa
Ny alika tsirairay dia manana toetra maromaro ary mora voan'ny aretina sasany izy ireo. Raha misy ny olana momba ny urin dia misy ny karazana izay mety hiteraka olana bebe kokoa, ohatra, ny fikiana bebe kokoa, ny kely kokoa amin'ny urin, ny tsy fahazakana, ny fivontosan'ny fivontosana sns.
Anisan'izany ireto: Dalmatian, Yoshire terrier, Poodle, Bulldog, Cocker, Bichon, Russian Terrier, Lhasa Apso na Miniature Schnauzer. Tsy midika izany fa hiteraka io olana io izy ireo, fa kosa hiharan-doza kokoa noho izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Ny alikako dia mikiaka loatra, maninona?
Tsara ny tolakandro, manana alika efa-bolana aho. Mitsika sy misotro rano matetika izy. Mety aretin-kibo ve izany? Inona no azoko omena azy na hataoko?
Rachel Sanchez dia hoy izy:
Salama carmen. Ny torohevitra omeko anao dia ny hitondranao ny alikanao any amin'ny vet vetivety, mba hahafahany mandinika azy ary manamarina raha misy ny olana, indrindra ny fiheverana fa mbola tanora tokoa izy. Tsara vintana. Famihinana.
Valiny tamin'i Raquel Sánchez
Wanda dia hoy izy:
Vao 9 volana ny zanako kely ary marary mitsika be izy na dia any ivelan'ny trano aza izy ary misy fotoana koa mivoaka mavo be ny mony.
Valiny tamin'i Wanda
Geida dia hoy izy:
Miarahaba. Ny alikako dia nanomboka fitsaboana alikaola tamin'ny alàlan'ny antibiotika zaza sy loratadine. Manomboka amin'ny fotoana hanombohanao ny fitsaboana dia tsy azonao atao ny mihazona ny raninao ary vita na aiza na aiza. Talohan'izay dia nifanaraka tamin'ny toerana. Nilaza ny mpitsabo biby fa ara-dalàna izany saingy tsy manome ady hevitra amintsika izy ary manahy ny amin'ny fiovan'ny fitondran-tena izahay, manahy izahay fa misy zavatra ao amin'ny vatany izay tsy mandeha tsara. Ahoana ny hevitrao momba izany? Raiso mialoha ny fisaorana anay.
Mamaly an'i Gueida
Salama Gueida, misaotra anao nanome hevitra. Raha manana fisalasalana amin'ny fanazavan'ilay mpitsabo biby ianao dia tsara kokoa ny mangataka hevitra faharoa mba ho tony, satria tsy nanome anao ny adihevitra mifandraika izy ireo tamin'ity indray mitoraka ity. Mirary soa sy fifamihinana.
Bibi dia hoy izy:
Salama, manana alika omby Bull Terrier 2 taona izahay. Roa andro lasa izay dia nihiaka im-betsaka izy ary kely ny urine, androany dia zavatra tsy mbola fanaony mihitsy no nanaovany izany tao an-trano. Manana mpitsidika ao an-trano izahay, hanintona ny saina ve izany sa tsy maintsy hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby aho?
Mamaly an'i Bibi
Salama Bibi, mety ataoko hisintona ny saina izany, fa raha tsy manana fisalasalana ianao dia tsara kokoa ny manadihady ny alika ny mpitsabo anao, indrindra raha manohy ny fihetsika mitovy izy aorian'ny fitsidihana. Misaotra naneho hevitra ary mirary soa. Famihinana.
Salama Raquel, manana Yorsay Terrier aho, 12 taona, ny alikako, na dia ampidiniko in-telo isan'andro aza izy, dia mipi-maso be ao an-trano, indrindra fa imbetsaka amin'ny alina sy maraina ary tena be dia be, imbetsaka ny urine. tsy misy loko tsy hitako izay hatao ary manahy aho sao manana zavatra izy noho ny taonany na raha normal amin'ny tranga misy azy. Misaotra mialoha? ♥
Salama Belén, misaotra anao. Ny tena marina dia ny alika amin'ny antitra dia mety hijaly amin'ny tsy fihinanan-kanina toy ny antsika ny alika. Mety ho izany no olana amin'ny Yorkshire anao, fa aleo mitsidika toeram-pitsaboana biby ianao mba hahazoana antoka fa tsy misy olana lehibe. Tadidio koa fa ny fizahana veterinary matetika dia ilaina amin'ny alika zokinjokiny. Mirary soa, antenaiko fa amin'ny tranga ny alikanao dia zavatra kely izy io. Famihinana.
Salama, manana alika mpangalatra 3 volana ao anatin'ny adiny iray aho, afaka miihi intelo eo ho eo izy, mety hijaly amin'ny zavatra matotra ve izy?
Salama Lina. Mety ho noho ny antony maro izany, fa tsara kokoa ny manatona tobim-pahasalamana ho an'ny biby mba hijerena ny alikanao. Mirary soa sy fifamihinana.
Manuela dia hoy izy:
6 taona ny zanako kely, Yorkshire izy ary misotro be dia be ary mikiaka loatra, tsara raha omena azy. Cortisone?
Mamaly an'i Manuela
Salama manuela. Ny torohevitro dia ny tsy hanome fanafody ny alikanao mihitsy raha tsy manatona dokotera aloha, satria mety hanimba azy izany. Ny tsara indrindra dia ny manatona consultation veterinary mba hanadihadiana ny manam-pahaizana momba ny Yorkshire anao ary hahitana raha misy ny olana. Famihinana.
Dana dia hoy izy:
Salama, manana alika efa 4 volana aho ary tiako ho fantatra ny manavaka raha mikorisa be izy na ara-dalàna satria tsy misotro rano be izy fa mikotrika kely foana. MISAOTRA
Valiny tamin'i Danna
Salama Danna. Ny fihetsiky ny alikanao dia mety noho ny fahatanorany. Na izany aza, tsara kokoa ny manamarina ny mpitsabo anao amin'ny fizahana azy manaraka, mba hahazoana antoka fa tsy misy olana. Famihinana!
Ny alikako dia 4 taona eo ho eo ary efa nitombo ny lanjany, mety hahatonga azy hamindra im-betsaka; ary aza manao kely.
Manana Stanfor America aho ary nanomboka omaly dia nihiaka tao an-trano izy, na dia nesorinao teny ivelan'ny arabe aza izy, rehefa navoakanao tamin'ny 7 na 8 teo ho eo izay ianao, toa tsy tazo izy, izay mety ho, misaotra betsaka
oscar carattini dia hoy izy:
Manana bulldog frantsay 8 taona aho
Vao tsy ela akory izay dia nanomboka nihinana bebe kokoa izy, nahazo lanja kely, nisotro rano be dia be ary nivoa-drano. Tsy tonga teo am-baravarana nivavahany.
Nentiko tany amin'ny mpitsabo biby izy izay nanao fitsapana ra ara-dalàna
Izay tsy maintsy ataoko?
ahenao kely ny rano?
ahenao kely ny sakafo?
Mbola mila mianatra bebe kokoa ve isika? Iza?
Mamaly an'i oscar carattini
Salama, ny alikako dia 10 taona ary voan'ny diabeta, mikiaka be izy ary tsy dia mihinana firy, ampidiriko insuline azy, inona ny sakafo azoko omena azy, mahia be izy
Salama. Manana bibikely Maltese 2 taona izahay. Andro maromaro izay rehefa ampidinintsika izy alohan'ny hahatongavantsika amin'ny arabe dia miondrika eo amin'ny vavahady izy. Aterinay in-3 isan'andro izy. Na eo aza ny fananarana mafy azy ary fantany izany satria miondrika izy ary mitraka hatrany. Misy olona afaka manampy antsika ve?
Fa maninona ny alikako tsy hihinana na hisotro rano?